Ogaden News Agency (ONA) – Kulankii Madaxda Sare ee ONLF iyo Shacabka Soomaaliyeed ee Norway oo Qabsoomay
Kulankii Madaxda Sare ee ONLF iyo Shacabka Soomaaliyeed ee Norway oo Qabsoomay
Posted by wariye5	/ May 29, 2011
28.May.11. Oslo- Waxaa caasimada Oslo ee dalka Norway, shir balaadhan ku qabtay wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku xigeenka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeenya (ONLF) Mudane Maxamed Ismaaciil Cumar, uuna safarkiisa ku wehliyey, gudoomiyaha Hogaanka Abaabulka Arrimaha Bulshada Mudane Maxamec Cabdi Yaasiin Diirane. Kulanka oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay horana loo sii shaaciyey qabashadiisa ayaa waxaa ka soo qeyb-galay bulsho-weynta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Oslo iyo nawaaxigeeda.
Mas’uuliyiinta iyo madax dhaqameedka Soomaaliyeed ee kulanka soo xaadiray kana hadlay waxa kamid ahaa; Col. Cumar diiriye Cigale, Col. Abdi faarax Cadeysay iyo naba-doon Abdi risaq Tahliil Xasan, oo dhamaantoodba xusay taageerada bulsho-weynta Soomaaliyeed u hayso halganka ay hogaamiso Jabhadda ONLF ee xaq-u-dirirka ah.
Waxana sido kale, goobta shirka khudbad kooban oo qiimo badan leh jeediyey Dr. Abdi rashiid, oo si faah-faahsan u bayaamiyey damaaciga gumeysiga Ethiopia ka haya qabsashada dhulka Soomaaliyeed oo dhan iyo baraarug la’aanta dhinacaas ka haysata qeybo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed.
Intaas kadib, waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyay Gudoomiye Ku-xigeenka ONLF, Mudane Maxamed Ismaaciil, oo goobta ku soo bandhigay warbixin dhameeystiran oo ka turjumaysa xaaladda gudaha dalka uu marayo iyo siyaasadda dibada ee ururka ONLF ee dagaalka kula jira gumeysiga Ethiopia.
Mudane Maxamed Cabdi Yaasiin Diirane, oo ah Hogaanka Arrimaha Abaabulka Bulshada ee ururka ONLF, ayaa isna khudbad goobta uu ka jeediyay ku xusay waajibka diimeed iyo midka walaaltinimo ee ka saaran ummadda Soomaliyeed u gar-gaarida walaalahooda ku hoos jira gumeysiga madow ee Ethiopia, siday isaga dul-qaadi lahaayeen ugana xoroobi lahaayeen, taas oo horseedi doonta ayuu yidhi dib-u soo noqoshadii dawladnimadii iyo karaamadii qaranka Soomaaliyeed ku lahaa aduunka. Hogaanka ayaa intaas raaciyey baahida loo qabo sidii shacabka Soomaaliyeed ugu midoobi lahaa ka hortaga gumeysiga Ethiopia, isagoo uga mahad-celiyey sida balaadhan ee ay shirka uga soo qeyb-galeen shacabka Soomaaliyeed.
Waxana ugu dambeyntii su’aalo ku saabsan halganka iyo xaaladda Ogadeenya, la weydiiyey mas’uuliyiinta ururka ONLF, oo baryahanba socdaalo kumarayey qaaradda Europe, iyagoo bixiyey jawaabo waafi ah dadkuna ku qanceen. Shirkan ayaa ku dhamaaday jawi guul iyo farxadi ku dheehan tahay.
Madaxa Warfaafinta Jaaliyada Soomalida Ogadeenya ee Norway.
allaah ha ka abaal mariyo mas`uulinta JWXO dadaalkan aya ku jiraan, jaaliyadda soomaalida reer Ogaadeeniya ee Norwey iyaguna way mahadsanyihiin,
guulaysta sii giijiya